Nweta Disk Drill Media Recovery maka naanị € 0,99, chekwaa ihe ruru euro iri anọ | Esi m mac
Nweta Disk Drill Media Recovery maka naanị € 0,99, chekwaa ihe ruru euro iri anọ
O doro anya na ihe karịrị otu oge, na n'amaghị otu o si mee, ị chọtala onwe gị n'ọnọdụ nke ịchọrọ faịlụ na Mac gị ma chọpụta na ọ apụla. Ihe kachasị dị na ya bụ na ihichapụ ya na ndudue na, ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị mkpa, nsonaazụ ya nwere ike ịnwụ.
Kechioma Disk malite ịgba Media Iweghachite bụ ngwá ọrụ na-enye anyị ohere "Naghachi data ọ bụla disk oyiyi byte byte […] na atọ mfe nzọụkwụ". Ọzọkwa, ọ na-ere ugbu a jiri ego nkwanye 97% dị ịrịba ama ya mere na ọ bụ oge kachasị mma iji jide ngwa a ọbụlagodi, maka oge ahụ, ị ​​chere na ị gaghị achọ ya.
1 Disk malite ịgba Media Recovery na-agbake data ị chere na ọ furu efu ruo mgbe ebighị ebi
1.1 "Ọ bụrụ na data gị ka dị, enwere ike weghachite, Disk Drill ga-emere gị ya"
Disk malite ịgba Media Recovery na-agbake data ị chere na ọ furu efu ruo mgbe ebighị ebi
Ọnwụ data na faịlụ bụ ihe nhụjuanya maka onye ọrụ ọ bụla, ọkachasị maka anyị na-arụ ọrụ anyị na kọmputa Mac kwa ụbọchị. Anyị na-echekwa nnukwu ọrụ anyị ma tufuo ha bụ ihe efu na igbu oge dị ukwuu, yana ego. N'ihi nke a, nkwado ndabere na mpaghara adịwanye ewu ewu, ma na draịvụ ike anụ ahụ ma na-eji ọrụ igwe ojii arụ ọrụ. N’agbanyeghi nke a, ihe egwu na anyị n’amaghị ama hichapụ foto, vidiyo ma ọ bụ dọkụmentị dị mkpa nye anyị dị adị na, ọ bụ ezie na ọ bụ nkwenye a ma ama na ozugbo ehichapụ, ha enweghị ike ịgbake, nke bụ eziokwu abụghị.
Disk malite ịgba Media Iweghachite «Bụ mfe iji data mgbake ngwa nke Mac. Dị ka nke mbipute 2.0 ọ ga-ekwe omume naghachi data ọ bụla disk oyiyi byte byte. Ngwa ahụ na-akwado ụdị onyonyo ndị a: DMG, ISO, IMG. Iweghachite data na-ewere ọnọdụ n'ime usoro atọ dị mfe:
Mepụta disk disk (iji Disk Utility, dịka ọmụmaatụ)
Ibu diski oyiyi n'ime Disk malite ịgba
Pịa na Dịghachi »
Na Disk malite ịgba Media Recovery anyị nwere ike naghachi fọrọ nke nta ọ bụla ụdị faịlụ na anyị "furu efu" na anyị Mac kọmputaBụrụ ya foto, faịlụ egwu, vidio ụlọ anyị, ngwa na egwuregwu, dọkụmentị na ndị ọzọ. Isi ihe bụ na metadata nke faịlụ ndị ahụ ka dị, yabụ ọ dị mkpa na ị gbasoroghị usoro "ewu ewu" nke ihichapụ draịvụ ike 35 ugboro n'usoro 😂😂.
Disk malite ịgba nwere ike naghachi gị niile photos, music, akwụkwọ, ngwa, videos, na ndị ọzọ na ụdị data. Nhọrọ "Ndenye nyocha" na "Chọta akụkụ ndị furu efu" nwere ike weghachite data ehichapụ na mbụ, ọ bụrụ na metadata ka dị na sistemụ faịlụ ahụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na enwere ike wughachi ya. N'aka nke ọzọ, "Nyocha miri emi" na-arụ ọrụ na ọkwa dị ala, ma nyochaa diski na ụlọ ọrụ ọnụọgụ abụọ; ma ị nwere ike ịghachite data gị, site na ntinye aka faịlụ ahụ, ọ bụ ezie na aha mbụ, ọnọdụ, na njirimara nke faịlụ ahụ nwere ike furu efu ruo mgbe ebighị ebi.
"Ọ bụrụ na data gị ka dị, enwere ike weghachite, Disk Drill ga-emere gị ya"
Disk malite ịgba bụ dakọtara na ma raw disk oyiyi na niile na-ewu ewu faịlụ usoro: HFS, HFS +, FAT16 na FAT32, NTFS, EXT3, EXT4.
Na mgbakwunye, ọ na-enye ọtụtụ nzacha dị iche iche iji nyere gị aka ịchọ, chọta ma hazie faịlụ ndị enwetara, yana "nlele anya n'oge, tupu nyocha ahụ zuru ezu".
Disk malite ịgba Media Iweghachite nwere a Ọnụahịa oge € 39,99 ma ugbu a ọ bụ dị na mbelata 97% maka naanị € 0,99. Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ ohere pụrụ iche iji chekwaa faịlụ gị dị mkpa maka naanị otu euro.
Disk malite ịgba Media Iweghachite39,99
Rịba amaEchefula na Disk malite ịgba Media Iweghachite bụ na ere maka obere oge. O di nwute, oge a anyi maara nke a Nkwalite ahụ ga-akwụsị echi, Wednesday, Jenụwarị 18, ma anyị amaghị oge ọ ga-agwụ. Maka nke a, mee ọsọ ọsọ iji nweta ngwa a ma rite uru na ego nke euro iri atọ na itoolu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Nweta Disk Drill Media Recovery maka naanị € 0,99, chekwaa ihe ruru euro iri anọ
Daalụ maka ịdọ aka ná ntị !! Na-ebudata ...
Silent Start, na-enye anyị ohere ịkwụsị ụda mmalite nke Mac anyị
Tinye ebe foto na Foto maka Mac